जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने अझपनि रोग नियन्त्रण हुने अवस्था छ : डा. गौतम « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2020 September 13, 9:38 am
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर पहिलेभन्दा अहिले बढेको र यो ८ देखि ११ प्रतिशसम्म रहेको स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भएकोले यहाँ धेरै केशहरु भेटिएको उनको स्पष्टोक्ति छ । हिजो (शनिबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग नेपाली बहस कार्यक्रममा कुरा गर्दै प्रवक्ता डा. गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उनले अझैपनि जनस्वास्थयका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने रोग नियन्त्रण हुने अवस्था रहेको सुनाए । प्रस्तुत छ डा. गौतमसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पि.सि.आर टेस्ट हामीले गरिरहेका छौँ । पैसा तिर्नु परेको छैन । कोही मान्छे गएर, होइन म त सरकारीमा जाँदिन, म लाईन बस्दिनँ, म त्यतातिर जाँदिन, म प्राइभेटमा नै जान्छु, खर्च गर्छु भन्यो भने मान्छेको स्वतन्त्रता छ नि त । आफु पैसा तिर्छु भन्दा तिर्न पाईन्छ ।